Spotlight on Ciise, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Waxaad haysaa daabacaad cusub oo majaladda "SUCCESSION" oo leh magaca "FOCUS JESUS". Hogaanka WKG (Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland) ayaa go’aansatay, halkaan joornaalkeeda u gaarka ah, iyadoo lala kaashanayo WKG (Jarmalka). Ciise waa diiradda aan saarno. Waxaan fiiriyaa sawirka gabadha da 'yarta ah ee bogga hore, waxaanan u daayay nafteyda in ay ku dhacdo cudurka xamaasadeysan. Indhaheeda iftiinka leh, iima fiirineyso, laakiin waxay u aragtaa wax gabi ahaanba iyada xiiseynaya. Miyuu noqon karaa ciise? Tani waa sax su'aasha uu Eebbe doonayo inuu ku kicinayo dhexdeeda, maxaa yeelay wuxuu doonayaa inuu ku dhiirrigeliyo qof walba jacaylkiisa iyo inuu nolol walba ku iftiimiyo iftiinkiisa. Waxaad qaali ku tahay oo lagu jeclaaday indhaha Ciise. Laakiin sidoo kale isaguna rajo buu kuu qabaa adiga? Aqbal jacaylkiisa shuruud la’aan ah!
Aayadda ugu horreysa ee cinwaanka joornaalka "FOCUS CIISE" waxaa laga heli karaa Injiilka Yooxanaa, cutubka 6,29: "Tani waa shaqadii Eebbe ee aad rumaysay kii uu diray." Ilaaha Qaadirka ah ayaa Ciise u soo diray dhulka si uu u badbaadiyo aadanaha, inuu inaga badbaadiyo dambigeenna, inaan si xaq ah u hadlo, u bogsado, dhiirrigeliyo, oo dhiirrigelinno. Wuxuu doonayaa inuu weligiis noola noolaado jacayl diiran. Waa maxay waxa aad uga go'an tahay nimcadan, hadiyaddan aan u qalmin? In la rumeeyo Ciise, in isaga si buuxda loo aamino, maxaa yeelay isagu waa badbaadiye adiga iyo adiga.
Waxaan qirayaa: Naftayda kuma badbaadin karo waxkasta oo la yiraahdo guulaha wanaagsan, sadaqada iyo adeegyada jacaylka, maxaa yeelay waxaan si buuxda ugu tiirsanahay ciise. Isaga ayaa ah kan i badbaadin kara. Kama baqay inaan aqbalo gargaarkiisa oo dhan si uu isaga u badbaadiyo. Ma waxaad dareemaysaa aniga oo kale? Waxay rabaan inay Ciise kula kulmaan “biyaha harada dusheeda”. In alla inta aad isha ku hayso Ciise, waad u soo dhowaan doontaa isaga. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad xoogga u saarto hirarka sare ee noloshaada, waxaad moodaa inaad biyo galayso. Ciise wuu kuu soo dhowaanayaa, gacanta ayuu qabanayaa oo nabadgelyada ayuu kuu keenayaa - adiga! Rumaysadkaaga ayaa ah shaqada Ilaah ee adiga kugu taal.